Ama-Ultrasonicators Wophenyo lwe-Forensic - Hielscher Ultrasound Technology
Amadivaysi e-ultrasonic asetshenziselwa izicelo ezimbili ezinkulu kuma-labs forensic: for extraction nokuhlanza.
Isizinda se-Ultrasonic sisetshenziselwa ukuthola izinto ezihlosiwe ezifana ne-DNA, izingxenye zezidakamizwa noma ezinye izinhlanganisela ezisebenzayo.
Ukuhlanzwa kwe-ultrasonic iyithuluzi eliphumelelayo lokususa izinsalela kanye nezindleko kusuka kwendaba.
Amadivayisi we-Ultrasonic iyithuluzi elivamile kuma laboratories ahlaziywe kahle. Ukuze uphenyo lwama-forensic, i-ultrasonics isetshenziswa kakhulu khipha izinto futhi kuya izindawo ezihlanzekile kanye nezinsimbi ezincane.
Amadivayisi we-ultrasonic iyithuluzi eliqinisekisiwe lokukhipha ama-active compounds, amathrekhi nezinsalela ezivela kwisampula impahla, njengezicubu, izinwele, igazi, amathambo nezitshalo. Izicelo ezivamile zamadivayisi we-ultrasonic lab zihlanganisa isizinda se-DNA, amaprotheni, kanye amakhemikhali asebenzayo ezifana nezidakamizwa. I-Ultrasound iphumelela kakhulu ukukhulula udaba lwe-cell-entrapped noma izinto ezibophekile ezibangelwa Izithelo Eziphakeme of extracts in isikhathi esifushane. Ukusetshenziswa kwalo okulula kanye naso ukuthembeka futhi Reproducibility yizinzuzo ezinkulu zenqubo ye-ultrasound eyasizwa nge-extraction. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic isizinda!
Isibonelo: Ukukhishwa kwezindawo zokuhlala kwezidakamizwa
Ukuze uphenyo lwama-forensic, kuwumsebenzi ophindaphindiwe wokuhlola amasampuli ezinwele ezinsalela zemithi. Ukukhipha izidakamizwa kusuka kwezinwele kungenye yezinyathelo ezinengqondo kakhulu zokuhlaziywa kwezinwele njengoba izidakamizwa zifakwe ngokuqinile esakhiweni sezinwele futhi ngokuyinxenye ziboshelwe amaprotheni, i-melanin noma i-lipids yesimbrane esiyinkimbinkimbi. Ukukhiqizwa kwesivuno kuncike kwisakhiwo semithi, isimo se-matrix ezinwele, izinyathelo zangaphambi kokugaya, ubuhlungu be-solvent, nobude besikhathi. Ukusetshenziswa kwe-ultrasonics kusiza ekusizeni ukukhiqizwa okuphakeme okukodwa ngenkathi kunciphisa isikhathi sokwelashwa. Ngakho-ke, i-ultrasound iyindlela enokwethenjelwa kwezicelo zokufakelwa ema laboratories wezinto eziphilayo, ezempilo kanye nezempilo.
Umdwebo ongezansi ubonisa isivuno se-extraction esitholakale ngaphezu kwesigaba sokuhlakanipha esinezinyathelo ze-opiates (i-morphine, i-codeine, i-heroin, i-MAM) yesampula yezinwele ze-heroin yokubulala e-methanol.
Isizinda se-ultrasonic sama-opiates asuka kumasampuli ezinwele [Pragst 2004]
I-Ultrasonification iyindlela enhle kakhulu ye- ukuhlanza, ukulondolozwa futhi ukubuyiselwa izinsimbi, i-ceramics nezinye izinto. Amagagasi e-ultrasonic we-probe-uhlobo lwedivayisi ye-ultrasonic ivumela ukususwa okuqondile kwamadiphozi kusuka ezindaweni eziqhamukayo nama-orifices amancane. Ukuhlanzwa kwemishini amabutho I-ultrasound ingasetshenziswa nge-sonotrode (iphenyo) ngokuqondile ezindaweni kanye nasemigodini encane, imifantu emincane (micro-) kanye namafissi okukhipha ama-crusts angafuneki, ama-debris, ama-sediments noma ukungcoliswa kwe-microbial. Ngenxa yesicelo esicacile kanye nesibhekene nayo nokulawulwa kwayo okuqondile kwe-ultrasonic intensity, ama-ultrasonicators awasetshenziswanga nje kuphela kuma-labs forensic, kodwa ngokubuyiselwa nokulondolozwa kokuthola okuvubukulayo, futhi. Ukuphathwa okulula kanye nama-amplitudes alawulwa ngokucophelela aqinisekise ukuthi ukuhlanzwa kahle kodwa okuphumelelayo kufezwa.
Ultrasonic Lab Amadivayisi
Mozayani, Ashraf; U-Noziglia, u-Carla: I-Forensic Laboratory Handbook: Izinqubo Nokusebenza. I-Springer Science & Ibhizinisi, ngo-2006.
UPragst, uFritz (2004): Izingozi zokuhlaziya izinwele. T + K 71/2, 2004. 69-81.
Umsebenzi wabososayensi nabangcweti bezobunhloli kubandakanya ukuhlolwa nokuhlaziywa kwamasampuli egazi nezinwele, i-DNA, izigxivizo zeminwe, i-ballistics, izinjini ezinzima, izimoto, izinhlayiya, izinto ezilawulwayo, i-blood splash pattern, amamaki okulandelela nokuningi. Imiphumela etholakalayo yokuhlolwa inikeza izinkomba ezibalulekile. Lokhu kusho ukuthi ama-laboratories angama-forensic ahlinzeka ubufakazi bokufakazela ukusiza ukuxazulula ubugebengu, ukuchaza izingozi kanye nezinhlekelele kumakhasimende ekusebenzisweni komthetho, uhulumeni kanye nezinkampani zomshuwalense.
Izindawo zomsebenzi zamagatsha e-forensic laboratories zifika emkhakheni wezobugebengu, i-botany, i-chemistry, i-dactyloscopy, i-DNA analysis, i-entomology, i-geology, i-limnology, i-pathology, i-podiatry, i-oxicology, i-serology, ne-toxicology.